Kubatana 7 kucharamba kuri muUbuntu maererano naMark Shuttleworth | Linux Vakapindwa muropa
Nhau nezve shanduko yechokwadi muUbuntu yave iri uye ingangove nhau dzegore mukati meGnu / Linux World. Zvakawanda zvekuti mutungamiri anokwezva wekuparadzira aifanirwa kujekesa kusahadzika kwakawanda kwaiita Ubuntu Community nezve shanduko nyowani.
Kusava nechokwadi pamusoro chii chichaitika Kubatana 7 kana kuti shanduko ichataridzika sei kune vashandisi vanoshandisa Unity 7 pane kugoverwa kweLTS. Mibvunzo yakapindurwa ichisiya misoro yekuda kuziva.
Chinonyanya kushamisa pane zvese ndechekuti Kubatana sedesktop icharamba ichivapo muUbuntu repositories, kunyangwe ichizenge isiri desktop yekuparadzira. Izvi zvinobvumidza vashandisi vasingade kushandura desktop kubva pakuita kudaro, asi Kubatana 7 hakuchazove nekugadziridzwa kukuru kana shanduko.
Kunyangwe Kubatana 8 kusingasvike kumakomputa edu, tinogona kuenderera mberi nekushandisa Unity 7
Shuttleworth akajekesa izvo vashandisi vane Ubuntu 16.04 vanozoshandura desktop yavo neinotevera Ubuntu LTS vhezheni, asi muUbuntu (uye Canonical) ivo vari kushanda kuti maitiro acho asanyanya kutyisa sezvinobvira, kuve wakachena uye pasina matambudziko kumushandisi.
Iyo yakajeka server Mir icharamba iri paUbuntu, asi kukura kwayo kunononoka, achitobvuma kuuya kweWayland, graphical server iyo yakasarudzwa nevazhinji vashandisi, migove uye zvinofarirwa zveBuntu.
Uye kunyangwe paine zvakawanda zvisingazivikanwe nezve nhungamiro nyowani yeUbuntu, chokwadi ndechekuti vashandisi vazhinji vanozozvisimbisa vachiziva kuti Unity yavo inodikanwa ichaenderera mberi kuvapo uye senzira yevashandisi vasingade kushandisa Gnome Shell. Chero zvazvingaitika, kudzamara taedza shanduro dzeramangwana hatizokwanise kusarudza pane izvi zvisarudzo zveUbuntu, hazvo chokwadi ndechekuti Kubatana 7 kwakauya kuzokunda madhesiki emakomputa mazhinji kana pamwe kwete?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » Kubatana 7 kucharamba kuri muUbuntu maererano naMark Shuttleworth
Chinhu chinonyanya kushamisa ndechekuti nharaunda yakamunyevera; "Hatidi kubatana." Uku kutambisa nguva nekuedza zvine njodzi kuLinux, zvese izvi zvinogona kunge zvakashandiswa muGnome Shel kubva pakutanga. Ndinovimba kuti Canonical zvirinani inovandudza yakanaka yekuwedzera uye inopa Nautilus neimwe nzira.
Ini ndinofunga kuti Kubatana kuri kuzoshanduka kuenda kune chimwe chinhu, dzimwe nguva zvinhu zvinopedzisira zvaenda neimwe nzira pane kufunga
kana ini ndikakwanisa kukunda akawanda madhesiki pamakomputa kutenderera pasirese
Ndakachinjira kuna Mate pavakangowana gnome rutsigiro uye gnome shell yaitaridzika kunge inorema uye yakafanana nekubatana.
MATE IGNOME GTK2 FOMU ASI MAZUVA ANO.